Friday June 08, 2018 - 06:44:13 in Wararka by
Colaadda udhaxeysa dadka Soomaalida iyo Oromada ayaa markale dib ugasoo cusboonaaday deegaanno katirsan dhulka Soomaaligalbeed.
sawir hore iska hor'imaadyo dhaxmaray soomaalida iyo Oromada
Wararka ka imaanaya gobolka Fafaan ayaa sheegaya maleeyshiyaad Oromo ah ay weerar ku qaadeen shacab Soomaali ah meel ku dhow magalaada Jigjiga oo xarun u ah maamulka Cabdi Ileey.
Wararku waxay sheegayaan in shacab Soomaliyeed oo beeralay ay maleeyshiyaad Oromo ah duulleed ku qaadeen goob ku dhow degaanka Jinicsanay Dagaal culus ayaana halkaas ka qarxay markii beralaayda Soomaalida ah ay iska caabin adag kala hortageen maleeyshiyaadka Oromada.
Weraarkas waxaa kudhintay 5 ruux oo Soomaali iyo 7 kale oo dhawaacyo soo gaareen, sidoo kale waxaa jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray maleeshiyaadka Oromada ee dagaalka qeybta ka ahaa.
Xiisada u dhaxeeya labada dhinac ayaa lagasoo sheegayaa deegaannada dhaca halka ay iska saaranyihiin gobolka Oromia iyo dhulka Soomaaligalbeed oo ku jira gummeysiga Xabashida Itoobiya.
Boqolaal qof ayaa ku dhintay isku dhacyada u dhaxeeya dadka muslimiinta oo colaadda ay ka dhax abuureen maleeshiyaadkan Liyuu Booliska Itoobiya, Taliska Addis Ababa ayaa madaxa isku geliyay qowmiyadaha muslimiinta si uu sii wato damaciisa gurrucan ee gummeysi.
Dhinaca kale Wararka ka imaanaya isla gobolka Fafaan ayaa sheegaya in kumaanan shacab Soomaali ah oo kasoo barakacay dhulka Oromada ay gaareen magalaada Jigjiga halkaas oo ay ku wajahayaan xaalado aad uliita
Wariyaal ku sugan magalaada Jigjiga ayaa sheegaya in kumaanan haween, caruur iyo wayeello ah lagu arkayo magalaada iyaga oo tugsanayo mana wax kaalma ah oo ay ka heleen maamulka dabadhilifka ah ee Jigjiga kajira.
Kumaanan qoys Soomaali ayaa lixda bilood ee u dambeeyay kasoo barakacay dhulka Oromada markii ay maleeyshiyaadka Oromada bilaabeen xasuuq iyo hanti boob, waxaana muuqata in colaadda ka dhan taagan muslimiinta ay cirka iskusii shareerayso.
Qaraxyo Khasaara Dhaliyay Oo Ciidamada DF-ka lagula beegsaday Deegaanka Siinka dheer.